Marquette Homes Project Dutchtown मा आउँदै • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
मार्क्वेट होम्स प्रोजेक्ट डचटाउनमा आउँदैछ
प्रकाशित डिसेम्बर 30th, 2021
डचटाउनमा २०२१ को अन्त्य हुने क्रममा ठूलो समाचार छ: लुथरन विकास समूह Marquette Homes को लागि कोष प्राप्त गरेको छ, एक रूपान्तरणकारी परियोजना जसले छिमेकमा 60 नयाँ र पुनर्वसन किफायती आवास एकाइहरू ल्याउनेछ!
Marquette Homes के हो?
मार्क्वेट होम्स परियोजनाले डचटाउनको उत्तरी भाग र ग्राभोइस पार्कमा 14 वर्ग फिट आवासीय ठाउँ, साथै एउटा सानो व्यावसायिक इकाई समावेश गर्ने 54,000 भवनहरू र चिट्ठाहरू समावेश गर्दछ। लुथरन विकास समूहले साझेदारीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ समुदाय विकास उठ्नुहोस्। पर्यावरणीय र ऐतिहासिक समीक्षाहरू पछ्याउँदै, निर्माण आगामी 10 देखि 18 महिनामा सुरु गर्नुपर्छ र सुरु मितिको लगभग एक वर्ष पछि पूरा हुनेछ।
Marquette Homes ले ग्रेटर डचटाउन छिमेकमा 60 वटा किफायती आवासीय अपार्टमेन्टहरू ल्याउनेछ - 32 पुनर्वास एकाइहरू र 28 नयाँ निर्माण एकाइहरू। ती इकाइहरू मध्ये, दस एक बेडरूम अपार्टमेन्ट हुनेछ, 14 दुई बेडरूम एकाइ हुनेछ, र 36 तीन बेडरूम सुविधा हुनेछ। तीन शयन कक्ष इकाइहरू छिमेकको आवास स्टकको लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण थप हो, किनकि धेरै उपलब्ध एकाइहरू साना छन् र केवल एक वा दुई शयनकक्षहरू छन्। मासिक भाडा $ 390 देखि $ 885 सम्म हुनेछ। भाडाको लागि योग्य हुनको लागि, अधिकांश आवेदकहरूले क्षेत्रको औसत कुल आय (AMGI) को 60% वा सोभन्दा कम कमाउनु पर्छ। केही एकाइहरूलाई 30% AMGI को आय चाहिन्छ।
Marquette Homes गुणहरू
लुथरन विकास समूह विशेष गरी चुनौतीपूर्ण परियोजनाहरू लिनको लागि परिचित छ, र Marquette Homes कुनै अपवाद छैन। "हामी सधैं हामीलाई दिइएको स्रोतहरु संग सबै भन्दा राम्रो गर्न कोशिस गर्छौं," क्रिस Shearman भन्छन्, लुथरन विकास समूह को कार्यकारी निर्देशक। Marquette Homes परियोजनाले लामो समयदेखि खाली ठाउँहरू र गम्भीर ठूला मर्मतको आवश्यकता भएका पुराना भवनहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। तल Marquette Homes परियोजनामा ​​समावेश 14 गुणहरू छन्।
3845 पेन्सिलभेनिया एवेन्यू
Chippewa र Keokuk बीचको यो अतिवृद्धि खाली ठाउँ सहरको भूमि पुन: उपयोग प्राधिकरण (LRA) को स्वामित्वमा रहेको खाली पार्सलमा नयाँ आवासीय निर्माणको साथ जीवनमा फर्किनेछ।
4006 पेन्सिलभेनिया एवेन्यू
महत्त्वपूर्ण मर्मतको आवश्यकतामा एउटा मामूली चार-परिवारको अपार्टमेन्ट भवनले मार्क्वेट पार्कबाट एक ब्लक टाढा केही नयाँ जीवन इन्जेक्ट गर्नेछ।
3208 चिप्पेवा स्ट्रीट
चिप्पेवाको थप पश्चिममा, पहाडमा रहेको यो डबल लटमा एउटा सानो पुरानो घर रहेको छ जुन बिस्तारै LRA को स्वामित्वमा विगत दुई दशकदेखि प्रकृतिमा फर्किरहेको छ।
3012 चिप्पेवा स्ट्रीट
यो खाली ठाउँ, दस वर्षको लागि खाली, बहु-पारिवारिक आवास र एक मिश्रित-प्रयोग सम्पत्ति बीचको ठाउँ भरिनेछ जुन हाल ठूलो पुनर्स्थापना भइरहेको छ। यो परियोजना लुथरन विकास समूहको चिप्पेवा र मिनेसोटाको मुख्यालयबाट आधा ब्लक टाढा छ।
3922 लुइसियाना एवेन्यू
लुइसियाना र अल्बर्टामा रहेको यो बलियो चार-पारिवारिक फ्ल्याटले नयाँ पुनर्वास र डचटाउनमा गुणस्तरीय किफायती आवासमा फर्किनेछ।
3931 मिनेसोटा एवेन्यू
अगाडिको भागमा सेतो चम्किलो "बेकरी" इट्टाको विशेषता रहेको, यो मनमोहक चार-पारिवारिक फ्ल्याट ईंट-पक्की मिनेसोटामा पुन: जीवित हुनेछ, उत्तरमा आधा ब्लक। मार्क्वेट मनोरन्जन केन्द्र र थॉमस डन लर्निंग सेन्टर.
3656 दक्षिण कम्प्टन एवेन्यू
कम्प्टन र विन्नेबागोमा रहेको यो लामो खाली ठाउँले यस कुनामा नयाँ आवास इकाइहरू ल्याउनेछ ग्राभोइस पार्कको नामको छिमेकको हरियो ठाउँबाट एक ब्लक मात्र।
3721, 3729, र 3733 टेनेसी एवेन्यू
यी तीन नबिक्रिएका चिट्ठाहरू अपूर्ण कीस्टोन प्लेस आवास विकासमा अवस्थित छन्। प्रायः 2000 को प्रारम्भमा बनाइएको उप-विभागले अन्ततः धेरै खाली ठाउँहरू भर्न नयाँ निर्माण वृद्धि देख्नेछ। हाउजिङ क्र्यासको समयमा डेभलपर बस्ट भएपछि सबै चिट्ठा LRA लाई तोकिएको थियो।
3734 दक्षिण कम्प्टन एवेन्यू
डचटाउन-ग्राभोइस पार्क सीमा नजिकै, यो सुन्दर चार-पारिवारिक फ्ल्याटले चाँडै यसको झ्याल र ढोकाबाट बोर्डहरू आउनेछ।
3544 र 3548 मिनेसोटा एभिन्यू
मियामी र पोटोम्याक बीचको खाली र बोर्डेड अपार्टमेन्ट भवनहरूको एक जोडी, यी चार-पारिवारिक भवनहरू भत्काउने बलबाट जोगिएका छन् र ग्राभोइस पार्कमा जीवनमा फर्किनेछन्।
3734 दक्षिण कम्प्टन।
3544 र 3548 मिनेसोटा।
3305 XNUMX१। Meramec Street
सायद मार्क्वेट होम्स परियोजनाको मुकुट गहना, डाउनटाउन डचटाउनको मुटुमा रहेको यो तीन-तले भवनले एक विशाल पुनर्वास परियोजना सुरु गरेको देख्नेछ। लगभग 15 वर्षको लागि खाली, भवनले सडक स्तर र माथिको अपार्टमेन्टहरूमा एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक स्थान फिचर गर्नेछ।
परियोजना कोष कसरी छ?
Marquette Homes परियोजनाको लागि प्राथमिक कोषको स्रोत संघीय र राज्य कम आय आवास कर क्रेडिट (LIHTC) को बिक्री हो। थप रूपमा, परियोजनाले ऐतिहासिक कर क्रेडिटहरू, सेन्ट लुइस शहरबाट कोष, र भविष्यको भाडा मार्फत भुक्तानी गरिने ऋण प्राप्त गर्नेछ। परियोजनाको कुल लागत $16.5 मिलियन भन्दा बढी छ, विनिवेश गरिएको ग्रेटर डचटाउन छिमेकमा पूंजीको एक अद्भुत र धेरै आवश्यक इंजेक्शन।
लुथरन डेभलपमेन्ट ग्रुपले पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि कर क्रेडिटहरू पछ्याउँदै आएको छ, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत क्रेडिटहरू सुरक्षित गर्न कठिन लडाईको सामना गर्दै। मिसौरी आवास विकास आयोग (MHDC)। 2018 र 2020 को बीचमा, मिसौरी राज्यले वास्तवमा संघीय LIHTC अवार्डहरू मिलाउन रोकेको छ, जसले मिसौरीमा किफायती आवासको विकासको लागि अति महत्त्वपूर्ण यी कर क्रेडिटहरूको उपलब्धतामा अझ ठूलो दबाब दियो। आंशिक LIHTC मिलान २०२० को अन्तमा फर्कियो। "किफायती आवासको आवश्यकता धेरै ठूलो छ, तर स्रोतहरू सीमित छन्," शेरम्यान भन्छन्। LIHTC पाईको टुक्राको लागि अन्य विकासकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु कुनै सजिलो काम होइन।
परियोजनाको निरन्तर परिष्करणले अन्ततः २०२१ को डिसेम्बरमा LIHTC को सफल अवार्डमा परिणत भयो। परियोजनालाई सेन्ट लुइसका अधिकारीहरूबाट 2021 औं वार्ड एल्डरम्यान शेन कोन, 25 औं वार्ड एल्डरवुमन कारा स्पेन्सर, मेयर टिशौरा जोन्स, 20 औं जिल्ला राज्य लगायतको समर्थन छ। प्रतिनिधि रशीन एल्ड्रिज, 78 औं जिल्ला राज्य सिनेटर स्टीव रोबर्ट्स, सेन्ट लुइस पब्लिक स्कूल सुपरिटेन्डेन्ट डा. केल्विन एडम्स, र सेन्ट लुइस आवास प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक अलाना सी. ग्रीन।
लुथरन डेभलपमेन्ट ग्रुपको मिशनलाई एउटा वाक्यांशमा डिस्टिल गर्न सकिन्छ: "आफ्नो छिमेकीलाई माया गर्नुहोस्।" विश्वासमा आधारित संस्था भएता पनि लुथरन विकास समूहको काम सुरक्षित आवास र अवसरहरूमा पहुँच प्रवर्द्धन गर्न धर्मशास्त्रीय सीमाभन्दा पर पुग्छ।
लुथरन विकास समूह 2015 मा उनीहरूको चर्च वरपरका समुदायहरूलाई उठाउने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो। लुथरन चर्च, यसको जर्मन पूर्ववर्तीहरूसँग, ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रमा व्यापक जराहरू छन्। छिमेक एक पटक Concordia सेमिनरी को घर थियो। होली क्रस लुथरन चर्च, Gravois पार्क मा मियामी स्ट्रीट मा, 1850 मा स्थापित भएको थियो र आज सम्म एक छिमेकी लंगर बनेको छ। लुथरन विकास समूहले स्थापना गर्न होली क्रससँग साझेदारी गर्यो अन्तर्क्रिया कला केन्द्र र ईगल कलेज प्रिपरेटरी स्कूल, चर्चको पूर्वमा।
अन्य लुथरन विकास समूह परियोजनाहरू
बाडेन स्कूल अपार्टमेन्ट
LIHTC कोषको पछिल्लो चरणमा, लुथरन विकास समूहले उत्तर तर्फको बाडेन स्कूल अपार्टमेन्ट परियोजनाको लागि कर क्रेडिटहरू पनि सुरक्षित गर्यो। परियोजनाले हल्स फेरी रोडमा रहेको 1907 विलियम इटनर-डिजाइन गरिएको प्राथमिक विद्यालयलाई 50 किफायती अपार्टमेन्टमा रूपान्तरण गर्नेछ। डचटाउन जस्तै, बाडेनको जर्मन लुथरन समुदायमा व्यापक जरा छ, हालैका दशकहरूमा विनिवेशबाट पीडित छ, र पुन: प्राप्तिको लागि तयार छ धन्यवाद। निरन्तर छिमेकीहरू र नयाँ लगानीहरू जस्तै बाडेन स्कूल अपार्टमेन्टहरू।
ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रमा फिर्ता, लुथरन विकास समूहले डेलिभर गर्यो चिप्पेवा पार्क 2018 मा परियोजना। Chippewa पार्क मा 15 किफायती आवास एकाइहरू र तीन व्यावसायिक ठाउँहरू सहित 46 पुनर्वास भवनहरू समावेश छन्। पूरा भएपछि, लुथरन विकास समूहले आफ्नो मुख्यालयलाई चिप्पेवा र मिनेसोटामा एउटा सुन्दर नयाँ ठाउँमा सारियो र तिनीहरूको स्थापना गर्यो। जडित सम्पत्ति व्यवस्थापन सडक पार कार्यालय।
पूर्वी फक्स घरहरू
लुथरन विकास समूहको पहिलो परियोजनाहरू मध्ये एक थियो पूर्वी फक्स घरहरू। यस परियोजनाले डचटाउनको उत्तरमा फक्स पार्क र टावर ग्रोभ पूर्वी छिमेकीहरूमा बाह्रवटा गम्भीर रूपमा जीर्ण भवनहरू समावेश गर्दछ। संगको साझेदारीमा मसीह लुथरन चर्च र राइज कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, लुथरन विकास समूहले साउथ साइडमा कठिन तर प्रभावकारी परियोजनाहरू लिन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्यो।
बाडेन स्कूल अपार्टमेन्ट।
3100 Chippewa, Chippewa पार्क परियोजना को एक हिस्सा।
2833 म्याग्नोलिया, पूर्वी फक्स होम्स परियोजनाको भाग।
लुथरन विकास समूहलाई समर्थन गर्नुहोस्
2021 बिस्तारै, लुथरन विकास समूहले सफल वर्षमा अझ बलियो समापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एक बेनामी दाताले प्रदान गर्नुभएको छ $ 25,000 सम्मको मिल्दो दान डिसेम्बर 31st, 2021 सम्म प्राप्त योगदानहरूको लागि। तपाईको योगदान लुथरनको कामको प्रभाव विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ जसमा आवास विकास मात्र होइन, सामुदायिक पहलहरू, सहायक सम्पत्ति व्यवस्थापन, र भाडामा सहायता कार्यक्रम पनि समावेश छ जसले 40 भन्दा बढी परिवारहरूलाई घरमा राख्न मद्दत गरेको छ।
तल दायर गरिएको आवास. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, Gravois पार्क, आवास, र रियल एस्टेट. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो डिसेम्बर 30th, 2021 .
डचटाउन STL.org आवास मार्क्वेट होम्स प्रोजेक्ट डचटाउनमा आउँदैछ